डा. कुन्दन अर्यालको भाषा
शिव सत्याल काठमाडौं, १४ कात्तिक
मुख्य विषयमा प्रवेश गर्नुअघि पौराणिक ग्रन्थ महाभारतको प्रसंगबारे चर्चा गरौं ।
महाभारतको मुख्य लडाई सुरु हुँदा कौरवतर्फका सेनापति भिष्म थिए । शिखण्डीलाई अगाडि राखेर पाण्डवतिरका सेनापति अर्जुनले भिष्ममाथि वाण प्रहार गरे । अगाडि शिखण्डीलाई देखेपछि भिष्मले धनुर्वाण नउठाउने गरेका कारण अर्जुनलाई भिष्ममाथि वाण प्रहार गरेर मार्न सहज भएको थियो ।
शिखण्डीलाई अगाडि देखेपछि भिष्मले धनुर्वाण भुईँमा राख्नुको अर्कै कारण थियो । महाभारतमा शिखण्डीलाई नपुंशक पात्रको रुपमा व्याख्या गरिएको छ । आफू महावीर भएको र नपुंशकमाथि हतियार नउठाउने भिष्मको प्रतिज्ञाका कारण यस्तो भएको थियो । भिष्म–शिखण्डी सम्बन्धका अरु व्याख्या पनि छन् ।
सेनापति भिष्म उठ्नै नसक्ने गरी ढलेपछि कौरवले द्रोणाचार्यलाई सेनापति बनायो । द्रोणाचार्य आफैमा महावीर त थिए नै, योसँगै उनी आफैले चाहेको अवस्थामा मात्रै मर्ने विशेष वरदान पाएका थिए । र, कहिल्यै नमर्ने आफ्नो छोरा अश्वस्थामा मरेपछि मात्रै आफू मर्ने उनले घोषणा नै गरेका थिए ।
पाण्डव सेनापति अर्जुनलाई दुईवटा समस्या थियो । एउटा त द्रोणाचार्यलाई मार्दा ब्रम्हहत्याको पाप लाग्थ्यो । अर्काे कुरा उनी द्रोणाचार्यलाई हराउन पनि सक्ने थिएनन् ।
यस्तैमा अर्जुनको सारथी भूमिकामा रहेका कृष्णले जाली उपाय निकाले । महाभारत लडाईमा अश्वस्थामा नाम गरेको हात्ती पनि थियो । त्यो हात्ती कौरवपक्षबाट लडाईमा खटाइएको थियो ।
कृष्णले अर्जुनलाई अश्वस्थामा हात्ती भएतिर लडाई गर्न लगे । अर्जुनले अश्वस्थामा हात्तीलाई मारे । अनि अर्जुनले अश्वस्थामा मारेको हल्ला चलाइयो । यो हल्ला द्रोणाचार्यले पनि सुने । अश्वस्थामा कौरवको पक्षबाट पाण्डवविरुद्ध लडाई लडिरहेका भएपनि द्रोणाचार्यसँगै भने थिएनन् ।
द्रोणले अश्वस्थामा मरेको हल्ला सुनेपछि यकिन गर्न खोजे । कहिल्यै झुट नबोल्ने पात्र युधिष्ठिर पनि युद्धमै थिए । उनी पाँच पाण्डवमध्ये सबैभन्दा जेठा थिए । सत्य बोल्ने भएकै कारण दसैंको टीका लगाइदिँदा ‘सत्येम् च कुन्तीसुते’ भनेर युधिष्ठिरको जस्तै सत्य बोल्न सक्ने आशिर्वाद दिने चलन छ ।
द्रोणले युधिष्ठिरलाई भेटेर अश्वस्थामा मरेको हो कि होइन भनेर सोधे । युधिष्ठिरलाई पनि द्रोणका छोरा वा हात्तीमध्ये कुन अश्वस्थामा मरेको भन्ने यकिन थिएन । त्यसैले उनले ‘हात्ती हो वा मान्छे हो, अश्वस्थामा चै मरेकै हो’ भन्ने जवाफ द्रोणाचार्यलाई दिए ।
युधिष्ठिरले यस्तो जवाफ दिदै गर्दा ठूलो षडयन्त्र भयो । अर्जुनको सारथी बनेका कृष्णले ठूलो स्वरमा शंख बजाए । कृष्णको शंखको ध्वनि सुन्ने वित्तिकै युद्धस्थलमा रहेका सवैले शंख बजाए, झ्याली पिटे, नगरा बजाए, होहल्ला गरे ।
यस्तो हल्लाको कारण द्रोणाचार्यले युधिष्ठिरले भनेको ‘हात्ती हो वा मान्छे हो’ भन्ने वाक्यांश सुनेनन् । ‘अश्वस्थामा चै मरेकै हो’ भन्ने वाक्यांश मात्रै सुने । उनी थप पुष्टि गर्न पनि लागेनन् । अनि द्रोणाचार्य ध्यानमा लागे । ध्यान शक्तिको प्रयोग गरेर टाउको फुटाएर आफै मरे ।
महारभारतको यो प्रसंगपछि अब मूल विषयमा लागौं ।
१३ कात्तिक बिहान तिहार सकेर भर्खर कार्यालय आइपुगेका थियौं । समय त्यस्तै १० बजेतिरको हुनुपर्छ । सहकर्मी सागर चन्दले प्रधानमन्त्री ओली विरामी भएकोले अस्पताल लगिएको सूचना आएको सुनाए ।
हामी सबै न्यूजरुममा थियौं । सागरले सुनाएको विषय गम्भीर भएकोले सबैको ध्यान त्यतातिर गयो । तर, हामीलाई दुईवटा समस्या थियो । एउटा त मान्छेको स्वास्थ्यको विषय थियो भने अर्काे देशको प्रधानमन्त्री विरामी भएर अस्पताल भर्ना गरिएको विषय थियो । प्रधानमन्त्री ओलीको स्वास्थ्य अवस्था कमजोर रहेको तथ्य सार्वजनिक नै थियो ।
अनि सहकर्मी लिलाराज खनाल सूचनाको पुष्टि गर्न लागे । खनालले प्रधानमन्त्री ओलीका प्रेस सल्लाहकार डा. कुन्दन अर्याललाई टेलिफोन गरे । अर्यालले ‘नियमित चेकजाचको लागि बिहान साढे ९ बजेतिर ग्राण्डी अस्पताल लगिएको’ जानकारी दिए । र, उनले यो पनि भने–नियमित स्वास्थ्य परीक्षण हो, परीक्षण सकेर प्रधानमन्त्रीज्यू फर्कदै हुनुहुन्छ ।
सहकर्मी लिलाराज खनालले प्रधानमन्त्री ओलीलाई अस्पताल लगिएको हो कि होइन भन्ने पुष्टि गर्न ढिला गरे भन्दै हामी न्यूजरुममा ठट्टा पनि गर्दैथियौं । उनलाई हामी भन्दै थियौं ‘दाजु छिटो गर न हौ, सामान्य चेकजाच हो जस्तो छ, प्रधानमन्त्री फर्किसक्लान्, उनी फर्के भने अरुले प्रधानमन्त्री स्वास्थ्य परीक्षण गरेर फर्के भन्ने समाचार हाल्दा हामी प्रधानमन्त्री अस्पताल भर्ना भन्ने समाचार हालौंला नि ।
प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार डा. अर्यालसँग टेलिफोन संवाद सक्नेबित्तिकै खनाल पनि बेस्सरी हाँसे । र, उनले कारण सुनाए– तपाईंहरुले भने जस्तै भयो, प्रधानमन्त्री त स्वास्थ्य परीक्षण गरेर फर्कदै रहेछन् ।
अनि हामीले स्वास्थ्य परीक्षण गरेर प्रधानमन्त्री ओली फर्किए भनेर समाचार सम्प्रेषण गर्यौं । समाचार संप्रेषणलगत्तै न्यूजरुमभन्दा बाहिर रहेका साथीहरुले पनि च्याटग्रुपहरुमा प्रधानमन्त्री अस्पतालमै हुन सक्ने संकेत गरे । र, थप पुष्टि गर्न आग्रह गरिरहेका थिए ।
तर, हामी एक प्रकारको ढुक्कमा थियौं । प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकारसँग कुरा गरेर बनाएको समाचारमा कैफियत होला भन्ने अनुमान गर्न पनि गाह्रो थियो ।
हामी ढुक्क हुनुको अरु कारण पनि थिए । प्रधानमन्त्री ओलीका प्रेस सल्लाहकार डा. कुन्दन अर्याल त्रिभुवन विश्वविद्यालयको पत्रकारिता केन्द्रीय विभागमा पत्रकारिता नै पढाउँछन् । अहिले संचालनमा रहेका मूलधारका अधिकांश संचारगृहमा अर्यालले पढाएका विद्यार्थी कुनै न कुनै रुपमा नेतृत्व तहमा पनि छन् ।
अर्यालले रत्नराज्य लक्ष्मी क्याम्पसमा पढाउँदा धेरैपटक ‘पत्रकारितमा सकेसम्म विशेषण प्रयोग गर्नुहुँदैन, लाक्षणिक भाषा प्रयोग गर्न हुँदैन, द्विअर्थी भाषा प्रयोग नगर्ने’ भन्ने जस्ता सामान्य सिद्धान्त पढाएका थिए । उनी अहिले प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार भएपनि हामी पत्रकारिताका गुरुकै रुपमा बुझ्छौं र सम्मान गर्छाैं ।
तर, हामी चुकेछौं । डा. अर्यालले प्रयोग गरेको ‘उहाँ फर्कदै हुनुहुन्छ’ भन्ने वाक्यांश अचम्मको रहेछ ।
डा. अर्यालले फर्कदै हुनुहुन्छ भनेर दिएको जवाफलाई हामीले प्रधानमन्त्री ओली अस्पतालबाट बाहिरिसकेका वा बाहिरिने अन्तिम तयारीमा रहेका भन्ने बुझ्यौं । तर, यो बुझाइ गलत भयो ।
डा. अर्यालले प्रयोग गरेको ‘उहाँ फर्कदै हुनुहुन्छ’ भन्ने वाक्यांशको व्यापक अर्थ हुने रहेछ । जस्तो कि कसैले मेरो छोरा विदेशमा छ, अर्काे साल फर्कदैछ भन्दा रहेछन् । अर्काे वर्ष फर्कनेलाई पनि फर्कदै भन्न मिल्ने रहेछ ।
कसैले म कोटेश्वरमा छु, अब एक डेढ घण्टामा फर्कदैछु पनि भन्दा रहेछन् । एक डेढ घण्टा पछि फर्कनुलाई पनि ‘फर्कदै’ भन्न मिल्ने रहेछ । ‘फर्कदै’ भन्ने शब्दले बसेको ठाउँ छोडेको र तोकिएको ठाउँमा आइनपुगेर यात्रारत भन्ने अर्थ मात्रै दिदो रहेनछ ।
तर, पत्रकारिताका गुरु, कुन्दन सरलाई यस्तो व्यापक अर्थदिने शब्द प्रयोग गर्न किन रहर लाग्यो होला भनेर म प्रश्न गर्न चाहन्नँ । यो प्रश्न गर्नैपर्ने समस्या आइलागेको पनि होइन ।
केपी शर्मा ओली अहिले यो देशको सबै नागरिकको प्रधानमन्त्री हुन् । विश्वले नेपालका अहिलेका प्रधानमन्त्री भनेर केपी शर्मा ओलीलाई नै चिन्छ । त्यसैले अहिलेको टिम बालुवाटर प्रधानमन्त्री ओलीलाई समयमै औषधि खुवाउने, स्वास्थ्य अवस्थाको ख्याल गरेर प्रधानमन्त्री सहभागी हुने कार्यक्रमको समयतालिका बनाउने, बेलाबेलामा अस्पताल लगेर स्वास्थ्य परीक्षण गराउने तथा डाक्टरको सल्लाह बमोजिमका कामहरु गर्ने गराउने काममा इमान्दार भएर लागेको छ भन्ने मेरो विश्वास छ ।
प्रधानमन्त्री ओली अहिले पनि अस्पतालमै छन् । प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्य स्थिति कस्तो छ भनेर प्रेस सल्लाहकार डा. अर्याललाई सोधौं भने ‘नियमित स्वास्थ्य परीक्षणको लागि हो, उहाँ फर्कदै हुनुहुन्छ’ भन्ने जवाफ आउला । तर, डा. अर्यालले भनेको ‘फर्कदै हुनुहुन्छ’ भन्ने वाक्यांशले केही मिनेट, घण्टा, दिन, साता वा महिना केको संकेत गर्ला ?
प्रकाशित मिति: बिहीबार, कात्तिक १४, २०७६, १३:३४:००